Mpandrindra Arm aloha voalohany ho an'ny fampiharana mpihira - Infinite-electronic
HomeNewsMpandrindra Arm aloha voalohany ho an'ny fampiharana mpihira
LS1046A dia ampahany amin'ny portfolio-n'ny 64-bit Arm Layerscape NXP, izay misy ny Quad-core 1,8GHz Arm Cortex-A72.
Tafiditra ao anatin'izany ny fanapaha-kevitry ny paikady sy ny peripheralin'ny haingam-pandeha "ary dia ekena noho ny haavony avoakan'ny haitao sy ny haavon'ny lozisialy", araka ny voalazan'i Teledyne. Ny> 45,000 CoreMarks amin'ny kaonty dia mifanaraka amin'ny dingan'ny 10Gbit Ethernet, PCIe Gen3 ary SATA Gen3.
Ny fitaovana koa dia hita amin'ny farany ao Teledyne Modior 'computing' Qormino, izay ahitana tsiaro 4Gbyte DDR4.
Ny tranokalan'ny Teledyne e2v ao Grenoble dia manasongadina ny ampahany amin'ny sehatr'asa mitaky ny tontolo iainana, ary ny LS1046A dia azo ampiasaina ao anaty fonosana RoHS sy Pb.
Ankoatr'izay, ao anatin'ny fandaharam-pandraharahana momba ny fiainana andavanandron'ny Teledyne e2v ('SLiM') ny Teledyne e2v, ny androm-piainan'ity fitaovana ity dia azo atokisana mandritra ny 15 taona, na mihoatra, mba hisorohana ny olana momba ny fialamboly.
Teledyne e2v dia manana fifandraisana akaiky amin'ny NXP - ny portfolioeran'ny kalitaon'ny fiarovana sy ny fiarovana dia ahitana processeur-based processeur avy amin'ny QorIQ P- sy T-Series NXP, ary fitaovana PowerQUICC.
"Hitantsika ny fironana vaovao amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fiaramanidina sy ny fiarovana amin'ny fitaovana maoderina 64bit miaraka amin'ny fitaovana elektronika Teledyne e2v avy amin'ny serivisy Layerscape Series", hoy ny mpandraharaha momba ny varotra NXP Altaf Hussain. "Mino isika fa ny mpanjifa e2v dia tsy vitan'ny hoe hampiasa ny fahaiza-manaon'ilay fitaovana fa ny tontolo iainana izay manohana ny Arm, izay mamorona fomba vaovao amin'ny rafitra sy rafitra."
Ny fitaovana maoderina momba ny haisoratra dia mahafantatra tsara ireo fampiharana avo lenta. "Ny mpanjifa dia mety handingana ny vahaolana amin'ny orinasa na hanomboka fivoarana vaovao miaraka amin'ny vahaolana azo antoka avy amin'ny Power Architecture avy amin'ny NXP", hoy i Teledyne.